Izithelo Ezihlanganisiwe - Izithelo ZaseChina Ezihlanganisiwe Abakhiqizi, Abahlinzeki
Ipentshisi eliphuziwe elisemathinini uhlobo lwesithelo esenziwe ngepentshisi eliphuzi. Ecebile nge-vitamin C eyengeziwe, umzimba womuntu wawudinga i-fiber, i-carotene njalonjalo. Ingadliwa ngokushesha ngemuva kokuvula isivalo noma ngemuva kokushisa. Ehlobo elishisayo, amapentshisi aphuzi asemathinini azonambitha kangcono kakhulu ngemuva kokufakwa esiqandisini. Izithelo zethu ezisemathinini zikhiqizwa efektri yesimanje enezinga eliqinile, akukho izithasiselo noma izivimbelakuvunda ezingeziwe. Imikhiqizo yethu yezithelo ekheniwe ithunyelwa emazweni angaphezu kwama-20 emhlabeni jikelele, kanti ipentshisi eliphuzi elisemathinini lingumkhiqizo othandwa kakhulu.
Ama-oranges asemathinini uhlobo lwesithelo esenziwe ngamawolintshi e-mandarin. Ecebile nge-vitamin C eyengeziwe, umzimba womuntu wawudinga i-fiber, i-carotene njalonjalo. Ingadliwa ngokushesha ngemuva kokuvula isivalo noma ngemuva kokushisa. Ehlobo elishisayo, amawolintshi asemathinini asemathinini azonambitha kangcono kakhulu ngemuva kokufakwa esiqandisini. Izithelo zethu ezisemathinini zikhiqizwa efektri yesimanje enezinga eliqinile, akukho izithasiselo noma izivimbelakuvunda ezingeziwe. Imikhiqizo yethu yezithelo ekheniwe ithunyelwa emazweni angaphezu kwama-20 emhlabeni jikelele, kanti amawolintshi asemathinini asemathinini angumkhiqizo othandwa kakhulu.
Okheniwe izithelo icebile ku-vitamin C owengeziwe, umzimba womuntu udinga i-fiber, i-carotene njalonjalo. Ingadliwa ngokushesha ngemuva kokuvula isivalo noma ngemuva kokushisa. Ehlobo elishisayo, izithelo ezisemathinini zizonambitha kangcono kakhulu ngemuva kokufakwa esiqandisini. Izithelo zethu ezisemathinini zikhiqizwa efektri yesimanje enezinga eliqinile, akukho izithasiselo noma izivimbelakuvunda ezingeziwe. Imikhiqizo yethu yezithelo ekheniwe ithunyelwa emazweni angaphezu kwama-20 emhlabeni jikelele, kanti ipentshisi eliphuzi elisemathinini lingumkhiqizo othandwa kakhulu.
Ipentshisi eliphuzi elisemathinini ngesiraphu elula luhlobo lwesithelo esenziwe ngepentshisi eliphuzi. Ecebile nge-vitamin C eyengeziwe, umzimba womuntu wawudinga i-fiber, i-carotene njalonjalo. Ingadliwa ngokushesha ngemuva kokuvula isivalo noma ngemuva kokushisa. Ehlobo elishisayo, amapentshisi aphuzi asemathinini azonambitha kangcono kakhulu ngemuva kokufakwa esiqandisini. Izithelo zethu ezisemathinini zikhiqizwa efektri yesimanje enezinga eliqinile, akukho izithasiselo noma izivimbelakuvunda ezingeziwe. Imikhiqizo yethu yezithelo ekheniwe ithunyelwa emazweni angaphezu kwama-20 emhlabeni jikelele, kanti ipentshisi eliphuzi elisemathinini lingumkhiqizo othandwa kakhulu.
Ikhukhi leLadyfinger, I-Hawthorn Strip, Izingane Amabhisikidi, Induku entsha ye-Bean Curd, Amaphakethe Esoso Soy, Ukudla Amakinati Anosawoti,